Kedu ndụmọdụ nke Queen si Canada?
Kedu ihe bụ ndụmọdụ Queen Queen (QC)?
Na Kanada, a na-akwanyere ùgwù aha nke Ndụmọdụ Ndị Nwanyị, ma ọ bụ QC, iji mara ndị ọkàiwu Canada maka ezigbo uru na onyinye na ọrụ iwu. Ọ bụ ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ dị mkpa, bụ ndị isi obodo Attorney General kwadoro, na-enye ndụmọdụ maka Ntuziaka Ndị Nwanyị.
Omume ịme ndokwa Ntuziaka nke ndị Queen adịghị agbanwe agbanwe na Canada, na njikwa ruru eru dị iche iche.
Ndozigharị agbalịwo ịmebie ihe ngosi ahụ, na-eme ka ọ mara ọdịmma na ọrụ obodo. Kọmitii ndị nwere ndị nnọchianya nke oche na ndị na-ahụ maka ihe ngebichi mmanya na-enye ndụmọdụ na Attorney General dị mkpa maka nhọpụta.
Na United States, gọọmenti Canada kwụsịrị ịhọpụta ndụmọdụ gọọmentị Queen Queen na 1993 ma maliteghachi omume ahụ na 2013. Quebec kwụsịrị ime Nhọrọ Ndị Ntorobịa na 1976, dị ka Ontario na 1985 na Manitoba na 2001.
Ndụmọdụ Queen Queen British Columbia
Ndụmọdụ Queen na-anọgide na-asọpụrụ na British Columbia. N'okpuru Iwu Ndụmọdụ nke Nwanyị Nwanyị, ndị ụkọchukwu-Gọọmenti na Kansụl na-eme nhọpụta kwa afọ, na nkwenye nke Attorney General. A na-ezigara Attorney General n'aka ndị ọkàikpe, Iwu Iwu Society nke BC, ngalaba nke BC nke Association Bar Association nke Canada na Ụlọ Ọrụ Iwu Iwu.
Ndị nomine ga-abụ ndị otu ụlọ ọrụ British Columbia maka ọ dịkarịa ala afọ ise.
A na-enyocha akwụkwọ na BC Council's Advisory Committee. Kọmitii ahụ gụnyere: The Chief Justices of British Columbia na Chief Justice nke Ụlọikpe Kasị Elu nke British Columbia; Onye isi ikpe nke Ụlọikpe Gọọmenti; mmadụ abụọ so n'Òtù Iwu ahụ họpụtara ndị ọsụ ụzọ; Onye isi oche nke Association Bar Canada, BC ngalaba; na Deputy Attorney General.
Dee ya na Premier nke Ontario
Yellowknife, Isi Obodo nke Northwest Territories
Ịgba Ntuli: Canadian Glossary Politics
Ụdị Omume nke 10 nke Math Curriculum
Ihe mere ị ga - eji nweta ogo mmụta
Usoro Nyocha Ọmụmụ
The Planet Mercury dị ka Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Sayensị Ụlọ Akwụkwọ
Ọwara nke Maine
Ozi ọma Club v. Milford Central School (1998)
Foto ndị Natalie Gulbis
Culture Hallstatt - Early European Iron Age Age
Ịghọta Ego: Gịnị Mere Ego Ji Enwe Uru?
Ihe Egwu Art: Graphite
Ntọala Nọmba 1
Mmiri Igwu Mmiri Chlorinated nwere ike ịkpata Asthma Na ndị na-egwu mmiri
Akụkọ ọdịnala ndị Juu banyere Ezi Okpukpe HBO: Ọ Bụ Vampire Lilith?
"Mulatto: Ajọ Ọdachi nke Mmiri miri emi"
Ihe ndị na-eme njem nlegharị
Mụta otú "Démernager" nwere ike isi nyere gị aka "Gaa Ụlọ" na French
SUNY Brockport GPA, SAT na ACT Data
Ihe Mere Ntughari Piano Na-eji Agbanwe Oge
Kedu ka omenala Chinese si ele ụmụ nkịta anya?
6 Ndị na-agba chaa chaa nke na-efu ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na ị na-eme ihe ọ bụla
Eziokwu Eziokwu Ronald Reagan
Esi kwadebe maka ule nlele
Na Hoax Nchekwa Monoxide Dihydrogen
Shawn Hornbeck kidnapping: Ihe kpatara na ọ gbapụghị na ya Captor
Mkpofu nke ọrụ
Ya mere, olee ihe ndi oru ugbo kwesiri ime?
Na-atụ egwu amụma ọnwụ site n'aka ndị ọkachamara